Technology - Shandong ZhongPeng Special now Co., Ltd
Office & Factory Bika Aman 'endrika
Tombony NY fanehoan-kevitra nampikambana Silicon CARBIDE
Fanehoan-kevitra nampikambana Silicon Carbide (RBSC, na SiSiC) manolotra vokatra tafahoatra ny hamafin'ny / abrasion fanoherana sy tena tia ady simika filaminana ao amin'ny tontolo. Silicon Carbide dia synthetic zavatra izay mampiseho toetra fampisehoana avo ao anatin'izany:
l Excellent simika fanoherana.
Ny herin'ny RBSC dia efa ho 50% lehibe noho ny an'ny ankamaroan'ny nitride nampikambana silisiôma carbides. RBSC no tsara harafesiny fanoherana sy antioxidation tanimanga .. Azo namorona ho isan-karazany desulpurization nozzle (FGD).
l Excellent anaovan'ireo sy ny fiantraikany fanoherana .
Ny tampon goavana tanimanga abrasion mahatohitra ny teknolojia. RBSiC manana hamafin'ny ambony manakaiky ny an'ny diamondra. Natao ho ampiasaina amin'ny fangatahana lehibe ny endriny izay refractory naoty ny silisiôma carbide dia maneho Marokoroko sy hanaovana na fahasimbana avy amin'ny vokatry ny poti lehibe. Mahatohitra ny mivantana impingement-pahazavana poti ary koa ny fiantraikany sy ny sliding abrasion ny mavesatra solids misy slurries. Azo namorona ho isan-karazany ny endriny, anisan'izany ny cone sy hasehonao endriny, ary koa sekely hoatr'izany sarotra kokoa ho an'ny fitaovana natao nandray anjara tamin'ny fanodinana ny akora.
l Tsara mafana dona fanoherana.
Fanehoan-kevitra nampikambana silisiôma carbide singa manome miavaka mafana, fa tsy toy ny dona fanoherana seramika nentim-paharazana, izy ireo koa dia mitambatra ambany hakitroky avo hery mekanika.
l Avo hery (tombony hery amin'ny hafanana).
Fanehoan-kevitra nampikambana Silicon carbide mitana ny ankamaroan'ny hery ny milina amin'ny avo mari-pana sy ny fampirantiana ambaratonga ambany dia ambany ny mikisaka, ka mahatonga azy io safidy voalohany ho an'ny entana-mitondra fangatahana ao amin'ny isan-karazany 1300ºC ho 1650ºC (2400ºC ho 3000ºF).
Fanehoan-kevitra nampikambana Silicon Carbide
Nitride nampikambana Silicon Carbide
~ 2,65 2,75
~ 160 180
Modulus ny fihenjanan'ny resaoro
W / (m * l)
Confficient ny mafana fanitarana
Mons 'hamafin'ny sehatra (Hentitra loatra)
Industry Case Fa Fihetsiky nampikambana Silicon Carbide:
Power taranaka, harena ankibon'ny tany, Simika, Orinasa, lafaoro fandoroana biriky, milina orinasa orinasa mpamokatra entana, Mineraly & mpampatsiro hanina sy ny sisa.
Na izany aza, tsy toy ny metaly sy ny alloys, tsy misy manara-penitra ho an'ny orinasa fampisehoana fepetra silisiôma carbide. Amin'ny isan-karazany ny hira, densities, orinasa mpamokatra entana, sy ny orinasa traikefa teknika, silisiôma carbide singa mitovy afaka tanteraka amin'ny tsy tapaka, ary koa ny fananana milina sy simika. Ny safidy ny mpamatsy mamaritra ny ambaratonga sy ny kalitaon'ny ny fanazavana azonao.